खल्तीका निर्णयलाई कदापि मानिन्न – रामकुमारी झाँक्री, सांसद « हाम्रो ईकोनोमी
खल्तीका निर्णयलाई कदापि मानिन्न – रामकुमारी झाँक्री, सांसद
– संविधानको धारा १०३ (२) मा संसदीय समितिले कार्यपालिकालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था । तर, न्यायपालिकालाई होइन । क्षेत्राधिकारभित्रका कानुनी, राजनीतिक, प्रचलित मान्यताका विषयमा संसदीय समितिले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने नै हुन्छ तर यस्ता विश्लेषण नगरिकन दिइएका निर्देशन हलुका सावित भए । संसदीय समिति आफैंमा मर्यादित, व्यवस्थित, संविधान र कानुनको अधीनमा हुनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक मान्यतालाई मान्नुपर्ने अवस्था छ । जब संसदीय समितिहरु दुई फरक–फरक झगडियाको विषयमा प्रवेश गर्छन्, अनुकूल भए कार्यान्वयन गर्ने, प्रतिकूल भए मौन बस्ने काम हुन्छ अनि समस्या जन्मन्छ ।
संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नहुँदा न्यायालय र न्यायिक निरुपणका सन्दर्भमा चालिएका कदम र लिइएका निर्णयउपर कहिल्यै प्रश्न उठ्दैनथ्यो । जब संविधानमै संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भयो, त्यसपछि न्यायालयलाई पनि जनताप्रति उत्तरदायी ठह¥याइयो । यसबीच कार्यपालिकाले गलत प्रभावमा परेर गरेका निर्णयलाई संसदीय सुनुवाइद्वारा उल्टयाइएको छ । जुन दलले बहुमत प्राप्त ग¥यो, उसैले सरकार बनाउँछ । संसदीय समितिमा पनि उसैको बहुमत हुन्छ । त्यही कारण त्यसमा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो कि ?
– सरकार बालुवाटारको पर्खालभित्र सीमित घेराबन्दीमा चलिरहेको छ । निजी निवासको कोटरीभित्र कस्ता मान्छेको पहुँच हुन्छ भन्ने कुरा अनुमानयोग्य नै छ । सरकार सिंहदरबारबाट चलेको भए गलत स्वार्थहरु त्यहाँको पर्खालभित्र आउन अलि कठिन हुन्थ्यो । सिंहदरबारबाट राज्य सञ्चालन नहुँदा सहजीकरण कसलाई भयो ? केही सीमित पात्र, जसलाई जनता वा निर्वाचन कानुनले चिन्दैन । तर, ती आज राज्यसत्ताको सर्वेसर्वा भएको परिस्थितिमा जेखालको अभिव्यक्ति आएका छन्, डेढ वर्षमा राज्य सञ्चालन गर्दा जे–जे तरिका अपनाइयो, त्यो अपेक्षाकृत नै थियो । यस्तै मान्छेले नै सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने हुन् । यातायातको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने, ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने, एनजिओ–आइएनजिओका सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने भनिएको थियो ।
म्यानपावर व्यवसायीलाई रेगुलेट गर्ने विषय कहाँ गयो ? तरकारीको विषादी प्रकरणमा सरकारले घुँडा टेक्यो । के तत्वले प्रभाव पारिरहेको छ ? किन निर्णय गर्दै ब्याक हुन बाध्य पारिएको छ ? यस्ता कामबाट फाइदा पाउने दलाल, माफिया र बिचौलियाले हो । र तिनैले सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन बाध्य पार्ने हो । जहाँ सीमित मान्छे राज्यको हर्ताकर्ता हुन्छ, त्यहाँ सरकार, प्रधानमन्त्री बदनाम हुन्छ हुन्छ । हामीलाई व्यक्तिभन्दा बढी पार्टी र नेतृत्वको चिन्ता छ । जनमत भनेको आँखाले घाम–जून देखेजस्तो हुँदैन । हिजोको जनमत आज कहाँ छ ? के भन्दैछ ? के बुझ्दैछ ? यो त अबका निर्वाचनमा देखिएलान् । आजै नसच्चिने हो, कमजोरी महसूस नगर्ने हो भने भोलि ‘जी–हजुरी’ गरेर कसैले पनि पार्टीलाई सत्ता सुम्पिँदैनन् ।
– आदरणीय जनसमुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि, निराशाको पारो नबढाउनु होला । यो पार्टीभित्र हामीजस्ता निस्वार्थ भावले काम गर्ने कार्यकर्ता पनि छौं । तपाइँहरुको जिन्दगीसँग हाम्रो जिन्दगी र भविष्य जोडिएको छ । यसकारण पार्टीभित्र भएका गलत कामको विरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गरिरहेका छौं । आश्वस्त हुनुहोस् कि, हामीसँग अझै तीन वर्षभन्दा बढी समय छ । यो अवधिमा पार्टीलाई सही ठाउँमा लैजान्छौं । पार्टी सही ढंगबाट चलेपछि पार्टीले नै सरकार चलाउने अवस्था आउँछ । अहिले सरकारले पार्टी चलाइरहेको छ ।
अब हामी पार्टीलाई व्यवस्थित गर्छौं र पार्टीले सरकार चलाउँछ । यसो भन्दा पार्टीभित्रका सीमित मान्छेहरु तिम्रो घाँटी चिलायो कि रुखको हाँगै बांगो हो ? भनेर व्यंग्य गर्छन्, हामीलाई । कसैले हाँगो बांगो देख्ला । कसैले घाँटी चिलाएको देख्लान् । बहुजनको हितका लागि एकजनाको घाँटी चिलाउन पनि मञ्जुरै भएको हो । आठ लाख पार्टी सदस्य छन् । पुग–नपुग दुई तिहाई सांसद छौं । मैले आज खाइरहेको खाना दिनभरको श्रमबाट हो वा नकमाएको सम्पत्तिबाट हो ? त्योचाहिँ पार्टीका सदस्यहरुले हेक्का राख्नुपर्छ । मैले श्रम गरेर खाएको हो वा दलाली, बिचौलिया काम गरेर हो ? यस्ता कुरामा हामीले आफैंलाई रि–करेक्सन गरेको खण्डमा पार्टी, सरकार सही ढंगबाट चलाउन सकिन्छ ।
– प्रधानमन्त्रीसँग २२ जना मन्त्री छन् । मन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवहरु अलग भए । झण्डै ८० हजार कर्मचारी त्यस मातहत काम गर्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई जे लाग्यो, त्यही निर्णय हुने गर्छ । व्युरोक्रेसीमा सूचनाका ढोकाहरु भएर पनि केही छैनन् । पार्टीभित्र छलफल भएको भए यस्तो हुन्थ्यो र ? ०५१ को सरकार किन लोकप्रिय भयो ? किनकि पार्टीले सरकार चलाएको थियो । मनमोहन पार्टी अध्यक्ष, माधवकुमार नेपाल महासचिव, वामदेव कमरेडलाई उपमहासचिव बनाएर संगठनको जिम्मा दिइएको थियो । महŒवपूर्ण नेताहरु सरकारमा गए पनि सबै निर्णय पार्टी कमिटीबाट हुन्थ्यो । पार्टीनजिक विचार राख्नेहरुले रातदिन काम गर्थे । र त, सरकार सफल भयो । आज त प्रधानमन्त्रीलाई, उहाँका सल्लाहकारलाई मन लागे निर्णय हुने, मन नलागे निर्णय नहुने अवस्था छ ।
टिमवर्क छैन । कतिपय मन्त्रीहरु नै आफ्नो मन्त्रालय कसले चलाइरहेको छ भनेर कन्फ्युज भइरहेको पाइन्छ । कुनै स्वार्थ नभएका वा चलखेल नगरेका व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै सक्दैन । प्रधानमन्त्री आफैँले भारतीय दूतावासको पत्र लुकाइयो भनिरहनुभएको छ । कि त प्रधानमन्त्रीले ढाँटिरहनुभएको छ, कि उहाँलाई कसैले ठगिरहेको छ । उहाँलाई जेन्युइन रिपोर्ट मन्त्री र सचिवले गर्न सकेका छैनन् । किनभने, उनीहरुको पहुँच नै छैन । सीमित दुई–चारजनाको घेरामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसभन्दा बाहिर जुन सरकार आए पनि रातारात बूढीगण्डकीको ठेक्का फुत्काउने, पर्यटन क्षेत्रबाट सुँड पसार्ने ठूला माफिया, बिचौलियाको अर्को घेरा छ ।
– हामी एउटै डुंगामा छौं । को कहाँ पुग्ने ? को कहाँ रहने ? भन्ने प्रश्नै रहँदैन । डुबे हामी सबै डुब्छौं । उत्रिए, सबै उत्रने हो । डुंगा जसरी पनि उतार्नुपर्छ । यो कुरामा कुनै ‘इफ’, ‘बट’, ‘बिकज’ चल्दैन । दुई जनाले मात्र ठेक्का लिने होइन, आठ लाख सदस्यलाई सोच्न दिनुस् । ती मान्छेलाई कुनै न कुनै कमिटीमा भूमिका दिनुस् । तिनै सदस्य पार्टी र सरकारको लोकप्रियताको बाटोमा सारथी हुनेछन् । इतिहासमा कमरेड प्रचण्ड र केपी ओलीको नाम लेखिने छ । जनआस्थाबाट